12 Izindawo ezihamba phambili zomculo emhlabeni | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 12 Izindawo ezihamba phambili zomculo emhlabeni
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Kusukela kumidlalo yaseshashalazini yasendulo ekhangayo ngaphansi kwezinkanyezi kuya emahholo amangalisayo nenhle, lezi 12 izindawo zomculo ezihamba phambili emhlabeni zilungele uma ufuna ngempela ukuthola amakhonsathi amahle kunawo wonke. Shanghai, Berlin, London, futhi i-Italy ezimbalwa nje zezindawo ezinhle kakhulu ukujabulela ikhonsathi yakho elandelayo yomculo bukhoma.
1. Izindawo ezihamba phambili zomculo emhlabeni: IRoyal Albert Hall eLondon
Kuvulwe ngomunye wamakhosikazi adume kakhulu emhlabeni, INdlovukazi uVictoria, iRoyal Albert Hall eLondon, ingenye yezindawo zomculo ezidume kakhulu emhlabeni. Njengoba ungena uzovuma ngokushesha ukuthi kungokwasebukhosini impela. Kusukela ekuhlobiseni kuya emoyeni lapho amalambu ecishiwe, ikhonsathi lapha izokunikeza ama-goosebumps.
Kusukela 1871 abalandeli bomculo bazo zonke izitayela, ukuya eRoyal Albert Hall for 365 izinsuku. Ngakho, noma ngabe uyi-jazz, idwala, noma umlandeli womculo wakudala, ikhonsathi yomculo bukhoma eRoyal Albert Hall yinto ongafuni ukuyiphuthelwa lapho useLondon. IRoyal Albert Hall iseNingizimu Kensington, futhi ifinyeleleka kalula ngeshubhu.
2. I-O2 Arena eLondon
Indawo yesibili ehamba phambili yomculo ku 12 izindawo zomculo ezihamba phambili emhlabeni yi-O2 Arena eLondon. Ingenye yezindawo zomculo ezibukhoma ezinkulu kunazo zonke eYurophu, nezwe, negumbi le- 20,000 izilaleli. Ngaphezu kwalokho, e 2008 lize leqa nokuthengiswa kwamathikithi eMadison Square Garden.
INkosana, UCirque Du Soleil, U-Alicia Keys, kanye namaBrit Awards, yimicimbi nje embalwa yomculo ongayijabulela e-O2 Arena. Uzodinga ukuhamba ngaphandle kwesikhungo saseLondon, kuya eGreenwich, kodwa ngomuzwa omuhle womculo, kuyifanele ngokuphelele inkinga.
3. Izindawo ezihamba phambili zomculo emhlabeni: Musikverein EVienna, Austria
Yakhiwe njengebhokisi lomculo eliphelele, i-epitome of elegance, le U-Wiener Musikverein, noma inhlangano yomculo, iyindawo yokugcina yomculo yakudala eYurophu. Ikhaya lePhilharmonics yaseViennese, ihholo lomculo lenzelwe isitayela sasethempelini lakudala laseYurophu, ngeFresco ka-Apollo ophahleni.
364 izinsuku ngonyaka, abathandi bomculo abavela emhlabeni jikelele, hamba uye eVienna ukuthola isipiliyoni somculo esivusa amadlingozi futhi ongasoze wasikhohlwa. Ngenxa yokwakhiwa, i-acoustics, umculo, indawo, nomkhathi, iMusikverein iphezulu kwe- 12 izindawo zomculo ezihamba phambili emhlabeni.
4. IVerona Arena E-Italy
I 12 izindawo zomculo ezihamba phambili emhlabeni zimane zifake indawo engcono kakhulu yokwenza i-opic opera. IVerona Arena yakhiwa ngekhulu lokuqala, futhi namanje uzokuthola umile, futhi ibamba abalandeli be-opera abavela kuwo wonke umhlaba.
IVerona Arena iyi-Amphitheatre yamatshe evulekile, futhi izindonga zayo zizokutshela izinganekwane zamagiladi bese zihlebeza amagama amaqembu e-pop. Umumo okweqanda ufaka inkundla yaseVerona njengenye yezindawo ezihamba phambili e-Italy ekhonsathini yomculo ebukhoma. Ama-acoustics, indawo ikhanyiswe ebusuku, kwenza kube enye yezindawo ezikhethekile kakhulu zomculo eYurophu.
URimini uya eVerona Ngesitimela
IRoma iya eVerona Ngesitimela
UFlorence waya eVerona Ngesitimela
IVenice eya eVerona Ngesitimela
5. Isikhungo Sikazwelonke Sobuciko Bokudlala EBeijing, China
Ubumbeke njengeqanda, art yesimanje ucezu, isikhungo sikazwelonke sezobuciko bokudlala singesinye sezakhiwo ezihlaba umxhwele eBeijing. Ngaphezu kwefomu eliyingqayizivele lesikhungo, kukhona ichibi lokufakelwa elizungezile.
Isikhungo sikazwelonke sezobuciko bokwenza yindawo enhle kakhulu yokujabulela ama-opera namakhonsathi abukhoma eChina. Nokho, uma ukhetha ukusebenza komculo wendabuko waseShayina, bese ihholo lekhonsathi liyindawo ekahle.
6. Izindawo ezihamba phambili zomculo emhlabeni: I-Arena Of Nimes EFrance
Inkundla yasendulo yaseRoma yasendulo ingabamba inani elivelele le- 24,000 abathandi bomculo. Le ndawo yomculo emangalisayo iheha izinkulungwane zezivakashi minyaka yonke, kweminye yemicimbi yomculo ehlaba umxhwele kakhulu eFrance.
Kusukela ku-pop wamanje wokukhahlela ku-Hans Zimmer, bukhoma imicimbi yomculo e-Arena of Nimes ayilibaleki. Ngezindonga ezikhanyiswe ngamalambu amibalabala ebusuku, izinhlelo zemisindo zivuliwe – Ikhonsathi lapha livusa amadlingozi ngempela.
EParis eya eNimes Ngesitimela
IMontpellier eya eNimes Enesitimela
IMarseille iya eNimes Ngesitimela
Nice to Nimes With A Isitimela
7. Ihlathi groyne eBerlin
Kutholakala e-Olympic Park e- idolobha lephathi iBerlin, iWaldbuhne iyinkundla yemidlalo evulekile. Pearl Jam, i-philharmonic yaseBerlin, noTaylor Swift bangabambalwa kuphela abaculi abanikeza amakhonsathi endaweni enkulu yomculo.
IWaldbuhne yaqala ukwakhelwa imidlalo yama-Olimpiki e- 1934, kepha kusukela lapho sekube yinye ye- 12 izindawo zomculo ezihamba phambili eJalimane, nezwe. Ungaba ngomunye wenhlanhla 20,000 abantu abaya kumculo obukhoma, ezungezwe amahlathi. Le ndawo yomculo emnandi isingathe amakhonsathi amaningi amahle eminyakeni edlule, ngakho-ke ungaba yingxenye yomlando womculo emcimbini omkhulu olandelayo womculo eJalimane.
8. I-Yuyintang EShanghai, China
Esethu 12 uhlu oluhle kakhulu lwezindawo zomculo ngeke lupheleliswe neklabhu yomculo ephezulu engaphansi komhlaba eChina. IYuyintang eShanghai ayinkulu njengezinye izindawo zomculo emhlabeni, kepha kungenye yezinto ezinhle kakhulu.
Kusondelene, futhi okukodwa, ngakho-ke ulungele ubusuku obumnandi bomculo. Abalandeli beRock abavela kuwo wonke umhlaba, babe nekilabhu leYuyintang ohlwini lwabo lwama-rock amahle kunabo bonke bokugcina 10 iminyaka. Ngakho-ke, ingahle ingabi nayo ingaphandle elingaphandle elihlaba umxhwele, kodwa imisindo nokudlidliza kuzokukwenza uqhume.
9. Izindawo ezihamba phambili zomculo emhlabeni: UFelsenreitschule ESalzburg, Austria
Lapho ubhuka ithikithi le- Umkhosi weSalzburg, lapho badubule khona Imisindo Yomculo – ungaqiniseka ukuthi le ndawo yomculo iyamangalisa. I IFelsenreitschule iyihholo lomculo elenzelwe ubhasikidi, nge 96 izindlela eziphakeme ngemuva kwesiteji.
Ngesikhathi sokudlala komculo, izindawo eziphakathi kwezindonga zikhanyiswa ngemibala, okuheha izethameli nakakhulu. Akunandaba noma okuthandayo komculo, umbukiso e-Austrian UFelsenreitschule umcimbi wazo zonke izinzwa – kahle kahle ukuthi umculo kufanele wenze futhi uthinte kanjani.
EMunich eSalzburg Ngesitimela
IVienna iya eSalzburg Ngesitimela
I-Graz iya eSalzburg Ngesitimela
ILinz iya eSalzburg Ngesitimela
10. Itiyetha yasendulo eTaormina, Italy
Ebheke ogwini lwaseCalabrian, itiyetha lasendulo eTaormina lakhiwa ngamaGrikhi cishe ngekhulu lesi-3 BC. Inhloso yale theatre ebabazekayo ibingumdlalo omuhle kakhulu.
Ngemibono emangalisayo yolwandle namazwe, uzothola lena yezindawo zomculo ezesabekayo emhlabeni. Ngakho-ke, negumbi le-orchestra, abadansi, abahlabeleli, uzobona ukuthi le theatre yasendulo yindawo ekhangayo yokushona kwelanga noma ukuphuma kwelanga imicimbi yomculo bukhoma.
11. Indlu yokuhlala yaseMao eShanghai
Kusukela kuzingoma eziku-elektroniki, IMao Livehouse yindawo yomculo enkulu kunazo zonke eShanghai. Ngakho, uma ufuna ukuzwa okuhle kakhulu kwasebusuku baseShanghai nomculo, bese iMao Livehouse iyindawo ye-IT yabantu bendawo nabavakashi.
IMao Livehouse inohlelo lomsindo oluhamba phambili eChina, iyenze indawo yomculo bukhoma bukhoma, nendawo yokwehlisa izinwele zakho nokuzamazama.
12. Izindawo ezihamba phambili zomculo emhlabeni: Itheyetha Yasendulo Ewolintshi, France
Itiyetha laseRoma e-Orange belilokhu lijabulisa abalandeli bomculo kusukela ngekhulu lokuqala AD. Akhiwe edolobheni lase-Orange, isingatha amakhonsathi, kanye nomkhosi waminyaka yonke we-opera wasehlobo eFrance.
Ungaba omunye we 10,000 abantu bejabulela umculo ongasoze wawukhohlwa enkundleni yemidlalo egcinwe kahle eYurophu. Inkundla yemidlalo yewolintshi iyi- ukuhamba ngesitimela kude kusuka eMarseille, kodwa uhambo olufushane lwesitimela luzokubuyisela emlandweni, kuya ezikhathini zamaRoma, nasemidlalweni ehamba phambili emculweni.
Ngezinye Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele iholide lakho elimangalisayo ku- 12 izindawo ezihamba phambili zomculo emhlabeni ngesitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo ezi-12 ezihamba phambili zomculo emhlabeni wonke” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-music-venues-world%2F%3Flang%3Dzu‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, futhi ungashintsha i- / ja ku- / ru noma / de nangezilimi eziningi.
BestConcertsEurope BestMusicVenuesInTheWorld ikhonsathi I-LiveLusicEurope umculo UmculoVenues